C-star - Fetiben'ny varotra iraisampirenena ho an'ny vahaolana sy fironana ao Shanghai Ny momba ny antsinjarany, mpikambana ao amin'ny fianakaviana ara-barotra EuroShop Trade, dia nitombo haingana hatramin'ny nanombohany ny taona 2015 ary nanjary sehatra lehibe mitazona ny indostrian'ny varotra manerana an'i Shina. C-star 2020 dia nanampy ...
Famokarana vokatra vaovao- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-02-16
Manosika karazana vokatra roa isika - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module. Ny trano rehetra dia mitantara, ary toy izany koa ny ao anatiny. Ny takelaka maivana maivana amin'ny fananganana lightbox LED avy amin'ny HYM Lighting dia afaka manampy anao hamolavola izany tantara izany. Ny endrika maodely mak ...
Ity i Couleur Lighting dia nandray anjara tamin'ny EuroShop, ny fanontana ny hetsika zava-dehibe indrindra amin'ny sehatry ny varotra 2020 dia nanararaotra nanehoan'i Couleur Lighting ny fivoarany sy ny fanavaozana azy. Tianay ny misaotra an'ireo rehetra nitsidika ny trano heva misy anay ao Euroshop ao Düsseldo ...